महेन्द्र मञ्जिलमा खानेपानी काटिएपछि समस्या-Brtnepal.com
महेन्द्र मञ्जिलमा खानेपानी काटिएपछि समस्या
Published on September 23, 2016 at 9:40 pm
खानेपानीको पाइप लाइन काटिएपछि महेन्द्र मञ्जिलका लागि पानी व्यवस्थापन निकै खर्चिलो बन्न पुगेको छ। महसुल नतिरेको भन्दै तत्कालीन मुमाबडामहारानी रत्न शाहको निजी निवास महेन्द्र मञ्जिलमा खानेपानीको आपूर्ति आठ वर्षअघि काटिएको थियो।
खानेपानीको पाइप लाइन पुनः सुचारु गर्न महेन्द्र मञ्जिलमा कार्यरत कर्मचारीले निकै दौडधुप गरे पनि प्रयास सफल हुन सकेको छैन । तत्कालीन मुमाबडामहारानी रत्न, उनका सुसारे तथा सुरक्षाकर्मीका लागि महेन्द्र मञ्जिलमा दैनिक १२ हजार लिटर पानी खपत हुँदै आएको छ।
खानेपानी पाइप लाइन काटिएकाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका पालामा किनिएको ट्याङ्करले दैनिक दुईपटक महाङ्कालबाट पानी ओसार्ने गरेको छ ।
रत्न शाहको रेखदेखमा खटिएका दरबारका पूर्वसचिव शम्भुप्रसाद अधिकारीले भने, ‘काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई एक पटकमा ८२० रुपियाँ बुझाउनुपर्छ । दुई ट्याङ्कर पानी दैनिक चाहिन्छ।’
‘यसरी पानी ओसार्दा निकै समस्या भएपछि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवसम्मलाई गुहार्‍यौँ तर उहाँहरूबाट टाउको नदुखाउनुहोस् भन्ने जवाफ पायौँ”, उनले भने। महेन्द्र मञ्जिलका लागि पानी खरिदमा मासिक ५० हजार रुपियाँ खर्च हुँदै आएको छ भने ट्याङ्करको इन्धन र मर्मत खर्च अतिरिक्त लाग्दै आएको छ ।
ट्याङ्कर पुरानो भएकाले बिग्रिएर धेरै दुःख दिने गरेको गुनासो गर्दै उहाँले डिजेल पनि धेरै खपत हुने गरेको बताए। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र भएकै बेला नारायणहिटी दरबारमा खानेपानीको अभाव भएपछि इनार खन्नुपर्ने वा बोरिङ गर्नुपर्ने विषय त्यहाँका कर्मचारीले उठाएका थिए ।
तर, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राजपरिवारमा इनार खन्ने चलन नभएको र बोरिङ गर्दा पानीको सतह घट्नसक्ने भएकाले पानी ओसार्नु नै उपयुक्त हुने भन्दै ट्याङ्कर किन्न आदेश दिएका थिए। सोही अनुसार २०५५ सालमा छ हजार लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्कर किनिएको थियो।
बा. २ क ५६५१ नम्बरको सो ट्याङ्कर चालक उपलब्ध नभएकाले महेन्द्र मञ्जिलको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका जवानलाई नै चालकका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। ट्याङ्करको ब्लुबुकसमेत नविकरण गरिएको छैन भने राजदरबार प्रमुख सचिवालयको नाममा दर्ता गरिएको छ ।‘नामसारी कसले गरिदिने? नवीकरण कसले गरिदिने ? समस्या नै छ’, दरबारका पूर्व सचिव अधिकारीले भने।
महेन्द्र मञ्जिलमा रहेका टेलिफोन लाइन पनि काटिएका थिए। पछि ६० हजार रुपियाँ तिरेपछि नारायणहिटी दरबार र नारायणहिटी सचिवालयका नाममा रहेका दुई लाइन टेलिफोन सुचारु भएका छन्। हाल ती दुवै टेलिफोन लाइनको खर्च महेन्द मञ्जिलले नै बेहोर्दै आएको छ।
महेन्द्र मञ्जिलमा रहेको कार्यालयका लागि पूर्व सचिव अधिकारीले आफ्नो नामको र इन्टरनेट सञ्चालन गर्न अर्का एक कर्मचारीको टेलिफोन पनि जडान गरिएको छ । महेन्द्र मञ्जिलमा कार्यरत सुसारेहरूका अनुसार रत्न शाहले भारतमा रहेका नन्द तथा भान्जाभान्जीलाई फोन गर्ने गरेकी छन्।
गत महिना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को लाइन काटिदिएको थियो । महसुल सरकारले बेहोर्ने भनेपछि विद्युत् लाइन पुनः सुचारु गरिएको थियो । झण्डै १० वर्षअघि पनि शुल्क नबुझाएको भन्दै विद्युत् लाइन कटौती गरिएको थियो ।यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।